Iwe wakatarisana nekurasikirwa kusingatarisirwi kwenhamba huru yevateveri ve Instagram?
Pamwe nekunetseka kuziva zvikonzero zviri shure kweizvi ? tsime, zvakangofanana nesu. Ndinogara ndichishamisika kuti sei ndiri kurasikirwa nevateveri pa Instagram zvisinei nekuedza kwangu uye zvese zvandakaita kukwezva vateveri.
Uyezve, Ndasvika pakugumisa kuti dambudziko rega rega rinoda kugadziriswa. Saka, muchinyorwa chino, isu tichakubatsira iwe kuona zvikonzero nei uri kurasikirwa nevateveri vako ve Instagram uye kukubatsira kuzvigadzirisa.
Sei Uri Kurasikirwa nevateveri pa Instagram ?
Kurasikirwa nevateveri chikamu chechisikigo chechiitiko che Instagram uye maitiro ekuvaka yako Instagram account.. Haasi munhu wose achafarira mashoko ako nguva dzose, vamwe vanhu vanogona kuita zvekutevera-uye-kusatevera zviitiko, uye unogona kungoita zviito zvinoita kuti vamwe vasakutevera iwe usingazvizive.
Asi dambudziko nderekuti : sei ndiri kurasikirwa nevateveri pa Instagram ? Kuti ndipe mhinduro kumubvunzo uyu, pano isu takapa 5 zvikonzero zvinokwanisika nei uri kurasikirwa nevamwe kana vazhinji vevateveri vako ve Instagram.
5 Zvikonzero Nei Uri Kurasikirwa nevateveri pa Instagram
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako..	Vanhu pa Instagram vari kuwedzera kusarudza
Instagram yave iripo kwenguva yakareba ; nhamba yevashandisi yakawedzera zvishoma nezvishoma mumakore uye, saka, zvinofarirwa nevanhu vazhinji nezvemhando yezvavanofarira kuona mumafeed avo zvachinja.
Izvi zvinoratidza kuti unogona kurasikirwa nevateveri ve Instagram nekuda kwekutumira zvekare kana zvisina basa zvemukati..
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako..	Iwe Kashoma Kutumira pa Instagram, kana kuti Kazhinji.
Kana iwe waona kuti nhamba yevateveri pa Instagram iri kuderera nekukurumidza kupfuura iri kuwedzera, kutumira kwako nguva dzose kunogona kuva mhosva.
Kana iwe usingatumire kazhinji, vanyoreri vako havazove nemukana wekuverenga zvirimo munhau yavo feed, izvo zvinogona kuita kuti varege kukutevera. Pane rimwe divi, kana ukatumira kakawanda, taura katanhatu pazuva kana kupfuura, zvinofinha uye zvinogona kuita kuti vanyoreri vako varege kukutevera.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako..	Maonero ekutanga Haakodzeri
Maonero ekutanga akakosha, saka chenjera kuti urege kuipa ! Chero zvazvingava, kunze kwemifananidzo yako, chinhu chekutanga chinotariswa nevateveri vatsva ibio yako, saka iva nechokwadi chekuzadza mukati nemanongedzero akavimbika kana makotesheni.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando.	Kushaikwa Kwekujeka uye Kuenderana paDingindira
Kana yako nhau yekudyisa isingashande, ine akasiyana akasiyana mafoto, asingawirirani mavara uye mimvuri uye inoshanduka yemhando yemifananidzo, uri panjodzi yekudzima vangangove vateveri. Pane rimwe divi, kana iwe uine zvakasarudzika zvemukati uye zvinowirirana zvinhu, iwe unongozowana vateveri pasina nguva. Saka iva nechokwadi chekuti unotamba uchiramba uchienderana.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando.	Zvinofinha kana zvisingafadzi
Mapikicha anokatyamadza anogona kumutsa mufaro muvateveri vako, asi zvinyorwa zvinokwezva zvinobata pfungwa dzevaverengi vako. Naizvozvo, kana zvinyorwa zvako zvinofinha kana zvisingafadzi, vanyoreri vako vachabhowekana uye vangangosakutevera.
5 Nzira dzeKugadzirisa
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako..	Iva Anochinjika uye Chinja Kuchinja
Shanduko haidzivisiki, kunyanya munyika ino ichiri kusimukira uye pa Instagram. Saka dzidza kujairana nemaitiro matsva uye chinjika mumaitiro ako kwavari.. Gadzira uye ugovane zviri kuitika uye misoro pane yako feed, uye pasina mubvunzo uchawana nhamba huru yevateveri.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako..	Iva Nepakati uye Yakajairwa Position
Sezvaunogara uchitumira kune yako feed, vateveri vako vanozotanga kudzidza uye kutonyanya kujairana nechero chinhu, kunyanya kana ichiyevedza. Saka, iva nemaitiro akadzikama uye enguva dzose 1 kusvika ku2 zvinyorwa pazuva, uye nhamba yako yevateveri ichawedzera.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako..	Kuzivikanwa Profile
Zviri nyore : zvese zvaunoda zvinobata maziso uye zvemhando yepamusoro mafoto, pamwe nemareferensi uye zvinotenderwa zvikwaniriso pane yako mbiri. Nenzira iyi, vanhu vanokuteverai vachada kukuteverai.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando.	Iva anowirirana uye akajeka mune Zvemukati Zvako
Kushandura zvinyorwa zvinowanzogumbura. Naizvozvo, iva nezviri mukati kana uchitumira pa Instagram ; gara pane imwe dingindira uye tamba mutambo. Iwe unogona, zvakadaro, gadzirisa zvemukati zvinoenderana nezviitiko zvekarenda., seZuva raValentine nevamwe.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando.	Ita Ngano Inonakidza uye Inomanikidza
Mumwe mufananidzo wega hauna kukwana kuunganidza vateveri ; unodawo ngano. Kuve nemifananidzo inonakidza kunobatsira kukwezva uye kuchengetedza vateveri vazhinji paaccount yako. Izvi zvakakosha pane ese social media mapuratifomu, saka gadzira ngano iyo inomutsa kufarira kwevateveri vako varipo uye venguva yemberi.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramFacebook : Facebook